मालसामान ढुवानीमा आजबाट ‘ट्राकिङ सिस्टम’ लागू, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
कर्पोरेट नेपाल , १ श्रावण २०७६, बुधबार, १२:३८ pm
काठमाडौं । सरकारले बुधबारदेखि व्यावसायिक मालसामान ढुवानी विवरणलाई अनलाइनमार्फ नियमन गर्ने गरी ‘भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस सिस्टमको सुरुवात गरे । प्रधाानमन्त्री केपी ओलीले यसको शुभारम्भ गर्ने भनिए पनि उनी कार्यक्रममा सहभागी हुन असमर्थ भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले शुभारम्भ गरेका हुन् ।
एउटै बिल बिजक तथा ढुवानी घोषणापत्रबाट पटकपटक मालसामान ढुवानी गर्ने, अवैध चोरी पैठारी गरी राजस्व छल्ने प्रवृत्ति निर्मूल गर्ने उद्देश्यसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको हो । यसको कार्यान्वयनले अपारदर्शी व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने र औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
उनले वेभमा आधारित यस केन्द्रीय सुचना प्रणालीले कर तिर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्ने र नतिर्नेलाई पनि तिर्न बाध्य गराउने बताए । अहिलेसम्म यस्ता सालसामान ढुवानीका ५० प्रतिशत (पाँच हजार) सवारी साधनहरु प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । प्रणालीको कार्यान्वयन आजबाट भए पनि तीन महिना प्रवद्र्धनात्मकरुपमा अघि बढाइने र त्यसपछि प्रणालीमा आवद्ध नहुनेहरुलाई कारवाही सुरु गरिने विभागले जनाएको छ ।
ट्राकिङ सिस्टममा आवद्ध नभई मालसामान ढुवानी गर्नेलाई विभागका महानिर्देशकले ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँ तत्कालै जरिवाना गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ भने त्योभन्दा ठूलो सजाय अदालतले मात्रै गर्नसक्नेछ ।
वस्तु आयातकर्ता तथा व्यवसायीले सामान ढुवानी गर्दा विभागले तयार गरेको वेबसाइटमा आफ्नो खाता (युजर आईडी) खोल्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवसायीको प्यान कार्डको स्क्यान कपी समावेश अनिवार्य गर्नुपर्ने छ । त्यही आइडीबाटै जुनसुकै समयमा पनि ढुवानी विवरण प्रविष्ट गर्न सकिने छ ।
अहिले कतिपय व्यवसायी तथा उत्पादकले एउटै बिलका आधारमा पटकपटक खरिद बिक्री गर्ने र त्यसकै कारण राजस्वसमेत गुम्ने अवस्था रहेकोमा त्यसलाई अन्त्य गरी ट्राकिङ सिस्टमले ढुवानीका क्रममा बिल बिजक तथा घोषणापत्र साथमै बोक्नुपर्ने, विभिन्न निकायमा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट उनीहरुलाई मुक्ति दिनेछ ।
अब भीसीटीएसबाट जारी भएको क्युआर कोड देखाए पुग्छ । दर्ता गराइएको विवरणका आधारमा ढुवानीकर्ताले ढुवानी अनुमतिका लागि तत्काल क्युआरकोड प्राप्त गर्ने विभागले जनाएको छ । त्यही क्युआरकोडका आधारमा मालसामान ढुवानी हुने छ । सवारी चालकले चाहेअनुसार यस्तो क्युआरकोड मोबाइल एपमार्फत वा प्रिन्टेड पनि पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
अनलाइनमा आधारित भेहिकल ट्राकिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा हतार गर्न नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले यस प्रणालीका बारेमा व्यवसायीहरु जानकार नहुँदै कार्यान्वयन गर्ने कुराले धेरै समस्या सिर्जना हुने बतायो । यसलाई तत्काल पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अहिले कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले खुलेको यस प्रणालीको विरोध नगरे पनि हतारमा कार्यान्वयन गरिएको बताए । कतिपय व्यवसायीले यो प्रणाली झन्झटिलो र अव्यावहारिक भन्दै आलोचना पनि गरे । विभागका महानिर्देशक दिर्घराज मैनालीले कागजपत्र प्रयोग नहुने र राजस्वका इन्ट्री प्वाइन्टमा रोकिनु नपर्ने यो प्रणालीले समग्रमा व्यवसायिक लागत घटाउने बताए ।
आर्थिक अपराध रोक्न नयाँ व्यावस्थाः अब मालसामान ढुवानी विवरण सूचना प्रणालीमा राख्नैपर्ने
कार्गोमा ‘अनलाइन क्लियरिङ सिस्टम’ लागू हुँदै, प्रतिकन्टेनर ४० हजारले लागत घट्ने
सडकमा ढुवानीका सवारी साधन बिग्रिएमा तत्काल मर्मत गर्न ई–ट्रान्सपोर्टेशन सर्भिस सुरु
स्थानीय ढुवानीमा समेत वेभ वेस्ड ट्रयाकिङ लागू गर्ने र प्यान अनिवार्य अव्यवहारिकः चेम्बर
मन्त्री पण्डितले भने- अब संघीय संसदपनि ‘पेपरलेश’ हुन्छ
मालसामान ढुवानी गर्ने साधन दिउँसो चल्न नदिने सरकारको निर्णयप्रति चेम्बरको आपत्ति
जुत्ताचप्पल मेलामा ओइरिए उपभोक्ता, सस्तोमा जुत्ताचप्पल किन्ने अवसर छोप्दै
महराले सफाइ पाउँदा रोशनी खुशी, ‘महरा सरले न्याय पाउँदा मैले पाएजस्तो भएको छ’
मातातिर्थ जग्गा प्रकरणमा जेल हाल्ने ओलीको तयारीपछि बाबुरामको चेतावनी– तिम्रो के हविगत होला ?
को बन्ला अर्थमन्त्री, को बन्छ गभर्नर ?-‘केपी ओलीलाई सोध्नुस्’
‘बाथरुम’ जोखिमपूर्ण बन्दै, कसरी जोगिने ?
राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिमा कड्किए अर्थमन्त्री, लक्ष्य भेट्टाउने गरि काम गर्न निर्देशन
समृद्धिको यात्रामा समन्वय खोज्न विकास समितिको प्रदेश दौड
साइबर सुरक्षा एकाई दुई अर्ब डलरमा बेच्ने डेलको घोषणा
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ‘टेक टक’
चेम्बर प्रतिनिधिसँग अर्थसचिवले भने-‘सम्पति शुद्धिकरणबाट व्यवसायी आतंकित हुनु पर्दैन’
परिसंघले अर्थ सचिव ढुंगानालाई सुनायो उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका समस्या
चन्द्रगिरि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई १ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा
बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा समितिको निर्देशन-‘एउटै बीमालेखबाट पति/पत्नीको बीमा नगर्नू’